Zeevou | ဆုရသော PMS၊ Channel Manager & Booking Engine
Google ၏အခမဲ့ Booking Links များ
ဆုရ PMS & Channel Manager
Zeevou သည်အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်ချန်နယ်လ်မန်နေဂျာဖြစ်ပြီးသင်၏တိုတောင်းသောကာလငှားရမ်းမှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလုံးနီးပါးကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးသည်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးလူ့အမှားကိုလျော့နည်းစေသည်။
Zeevou သည်သင်၏ it ည့် ၀ တ်ပြုမှုစီးပွားရေးကဏ္ aspect တိုင်းကိုစျေးနှုန်း၊ guest ည့်သည်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာရင်းအင်းများအထိအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အမျိုးမျိုးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Zeevou ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ထုတ်ကုန်များကိုလက်တွေ့ဘ ၀ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများထံမှတုံ့ပြန်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များစွာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးတက်မှုကိုယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုးတက်ခြင်း၊ တိုးတက်ခြင်းနှင့်ထူးခြားသောအရာများကိုပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ကွဲပြားခြင်းကိုသိရန်အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
လိုင်း 200+ ကိုဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်
overbookings ကိုရှောင်ရှားရင်းသင်၏ငှားရမ်းခကိုဖြစ်နိုင်သမျှလမ်းကြောင်းများအတိုင်းစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏အချည်းနှီးသောညများကိုဖြည့်ပါ။ Zeevou ၏အစွမ်းထက်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ API ဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းထားများနှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်လိုင်း ၂၀၀ ကျော်သို့ဖြန့်ဝေပါ။
အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ထူးခြားသည်။ သင်၏ဂုဏ်သတ္တိများကို Zeevou တွင်တင်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ၊ သင်၏နှုန်းထားများ၊ ရရှိနိုင်မှုကိုသတ်မှတ်ပြီးလိုင်းများကိုချိတ်ဆက်ပါ။ admin ရဲ့အချိန်ကိုချွေတာပြီးကြီးထွားမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ထို့နောက်ထိုင်။ အနားယူပါ။
သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်ချဲ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ Zeevou ကသင်၏သာမန်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလိုအလျောက်လုပ်ပါစေ။ သင်ရုံသင်၏အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်အာရုံစိုက်ပါ။ သင့်အတွက်လေးလံသောရုတ်သိမ်းမှုပြုပါရစေ ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်း!
Zeevou ဟာ PMS နဲ့ channel manager မဟုတ်ပါဘူး။ OTAs ပေါ်တွင်သင်၏မှီခိုမှုကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည်။ အင်အားတောင့်တင်းအောင်လုပ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေ၊ ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်း!
သင်၏အိမ်ခြံမြေများကို Zeevou Direct တွင်စာရင်းပြုစုပါ။ သင်၏အိတ်ကပ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်မှတိုက်ရိုက် ၀ င်ငွေရှိသည့်ငွေများကိုကြည့်ပါ။ ဘွတ်ကင်လုပ်တဲ့ပလက်ဖောင်းအများစုဟာ ၁၅-၂၅% ကောက်ခံတာကိုသင်သိပါသလား။ Zeevou Direct ဖြင့်အိမ်ရှင်နှင့် guests ည့်သည်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကောင်းမွန်သောအပေးအယူများရရှိသည်။ ထို့အပြင်အိမ်ရှင်နှင့် guest ည့်သည်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်မပါရှိခြင်းကြောင့်သင်သည်ချက်ချင်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရရှိလိမ့်မည်။ ယခုအခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ။ တိုက်ရိုက်စာအုပ်ချိန်းတော်လှန်ရေးကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကူညီပါ။ နှောင်ကြိုးမဲ့!
ကော်မရှင်တွေ၊ အလယ်အလတ် ၀ န်ထမ်းတွေ၊ လျှို့ဝှက်ကြေးတွေမရှိဘူး။
နာယကများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ - အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အစီအစဉ်များကိုစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် Zeevou ရဲ့စွမ်းအားအပြည့်ကိုဖြန့်ချီပါ။ Zeevou ၏ PMS၊ ချန်နယ်မန်နေဂျာနှင့်ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်များကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သည်။ အကန့်အသတ်မဲ့သောအခွင့်အရေးများကိုခံစား။ အနားယူပါ။
SEO အတွက်လွယ်ကူသောတိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ငှားရမ်းခများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကော်မရှင် - အခမဲ့ဘွတ်ကင်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Zeevou Direct တွင်စာရင်းပြုပါ။ သင့်ရဲ့တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အလိုအလျောက်။ ယနေ့အင်အားစုများကိုပူးပေါင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Partner Hosts ကွန်ယက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်လှမ်းမီမှုကိုကျယ်ပြန့်စေသည်။
နှစ်ပတ်လည်နာယကတစ် ဦး ကစကားလုံး
ပထမ ဦး စွာ Zeevou ထံမှသင်ရရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကူညီမှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ပေါ်လစီများအရ WhatsApp ကိုဆက်သွယ်သူအားသင်၏သင်တန်းသူ၊ Facebook messenger နှင့် Zeevou site ရှိ online chat သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်အများကြီးတောင်းခံလို့မရဘူး အခြားအရာများကဲ့သို့ပင်သင်အသုံးမပြုမှီတစ်စုံတစ်ခုလုပ်ရန်အကြိမ်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ ယခုသင် Zeevou ကိုရှာဖွေရန်အကူအညီလိုသောဆောင်းပါးများနှင့်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများမပါ ၀ င်ပါ။ သင်အသုံးပြုလိုလျှင်အံ့သြစရာကောင်းသည့်ကိရိယာများကိုသင်၏စမ်းသပ်မှုတွင်ပြုလုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးပညာပေးပါ။ ၎င်းတွင်သင့်တွင်သော့ကုဒ်များ၊ သန့်ရှင်းသောအချိန်ဇယားများ၊ အလိုအလျောက်အီးမေးလ်များစသည်တို့မှများစွာလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Zeevou ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအခြားမည်သူမဆိုနှင့်မသွားမီကျွန်ုပ်၏သုတေသနကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
Cara Watson-Hunt က
ဒဏ္ာရီ ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျနော်တို့ Zeevou ကိုရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာသုံးခဲ့ပြီးငါ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်ရမယ်။ တစ်နာရီပြည့်ဆန္ဒပြမှုကိုဘွတ်ကင်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ Zeevou ခရီးစဉ်အတွက်အစကောင်းခဲ့၏။ ၎င်းနောက် ၁.၅ နာရီ onboarding session တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးငါ Zeevou ၌ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါတိုင်းပေးပို့နိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနေရာထိုင်ခင်းလုပ်ငန်းတွင်အသစ်ဖြစ်ခြင်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပြီး Zeevou သည်အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်ကုမ္ပဏီ၏နှစ်ရှည်လများမျှော်မှန်းထားသည့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပိုက်ဆံတန်ဘိုးရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။
အစိမ်းရောင် Wall အိမ်ခြံမြေ Solutions
Zeevou ကကျွန်တော့်ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးပြောနိုင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနေထိုင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ၅ လိုင်းမန်နေဂျာများမှတဆင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကိုက်ညီမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းစွာအ Zeevou အမှုအရာစူပါရိုးရှင်းစေသည်! မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲသုံးရတာအရမ်းလွယ်ပါတယ်။ Zeevou ကို ၀ င်ရောက်ကတည်းကကျွန်တော့်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်မယ့်အစားငါ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုအာရုံစိုက်ဖို့အချိန်အများကြီးရခဲ့တယ်။ SA စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်ကိုတိုက်ရိုက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံခဲ့သည်။ Zeevou သင်သည်ဤလုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူများအုပ်စုတွင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးလျှင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းအဖြေရနိုင်သည်။ Zeevou သည်အလုပ်များသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူခြင်းအတွက်ပေးသောလက်ဆောင်သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ငါသုညယူနစ်နဲ့စတင်ခဲ့ပေမယ့်ငါလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာစကေးနိုင်သေချာစေရန် 100 ရှိသကဲ့သို့အရာတို့ကိုအကြောင်းကိုသွားချင်တယ်။ Zeevou သည်ရုပ်သံလိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါ။ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲမှုကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Airbnb မှတစ်ဆင့် ၃ ညခရီးစဉ်မှ£ 10K ဘွတ်ကင်ရရှိခဲ့သည်။ တိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုများသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေပြီး၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်ချက်ကိုယူပြီးကျွန်ုပ်အကြံပြုထားသည့်အပြောင်းအလဲများကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ သူဌေးသူဌေးကိုယ်တိုင်တောင်ငါဖမ်းမိတဲ့အခါကြည့်ရတာစိတ်ထဲမထားပါဘူး။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်တွင်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ တော်လှန်ရေးမှာပါ…
အိုလီဗာ Griffiths က
Zeevou သည် Cliftonvalley Apartments စကေးကို ၃ မှ ၁၅ ခန်းအထိကူညီသည်။ Zeevou သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်များ၊ guests ည့်သည်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဘဏ္ancesာရေးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားထိထိရောက်ရောက်စီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Signable, Xero နှင့် Stripe တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်းများသည်အလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းပမာဏကိုလျှော့ချပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အခြားကဏ္onများကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ Zeevou သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်လာနေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနေရာထိုင်ခင်းလုပ်ငန်း၏ကဏ္ all အားလုံးအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်နေရာတည်းသို့လျှင်မြန်စွာဖြစ်လာသည်။ Zeevou သည်ထုတ်ကုန်ကိုနားထောင်ရန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်သည်။ လက်ရှိပြည့်စုံသောလမ်းပြမြေပုံပေါ်ရှိအင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေပါသည်။
ကမ္ဘာကြီးသည်ဆင်းရဲခက်ခဲမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသော်လည်း၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းနှင့်လည်းပြည့်နှက်နေသည်။ ဟယ်လင် Keller
တွစ်တာ Facebook က linkedin Whatsapp Instagram ကို Pinterest စိတ်တိုးပွား